လူတစ်ယောက် စိတ်အရမ်းပင်ပန်းနေကြောင်း ဖော်ပြနေတဲ့လက္ခဏာ (၇) ခု - CeleLove
June 14, 2019 Cele Love ဗဟုသုတများ 0
တစ်ယောက်ယောက်ဟာ စိတ်အရမ်းပင်ပန်းလာတဲ့အခါ အသေးအမွှားလေးတွေကအစ ခံနိုင်ရည်မရှိနိုင်တော့ပါဘူး။ တကယ်လို့လူတစ်ယောက်ဟာ ဒေါသတွေကြီးနေမယ်၊ ထစ်ခနဲရှိစိတ်တိုစိတ်ဆတ်နေမယ် ဒါ့အပြင် ဒီလိုလက္ခဏာတွေကို တွေ့နေရတယ်ဆိုရင်တော့ အရမ်းစိတ်ပင်ပန်းနေတာဖြစ်လို့ နားလည်ပေးဖို့လိုပါတယ်နော် …. ။
(၁) လူတစ်ယောက်ဟာ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်စီစဉ်ထားပြီးသားအရာ တစ်ခုခုကို အနီးကပ်မှဖျက်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒါဟာ အရမ်းစိတ်ပင်ပန်းနေလို့ပါပဲ …. ။
(၂) အသေးအမွှားကိစ္စလေးတွေကအစ စိတ်တို၊ စိတ်ဆတ်နေတယ်၊ ဒေါသတွေကြီးနေတယ်ဆိုရင်တော့ စိတ်အရမ်းပင်ပန်းနေလို့ပါနော် …. ။
(၃) ညဖက်တွေကျရင် အတွေးတွေများပြီး နောက်ကျမှအိပ်သလို နောက်နေ့မနက် စောစောထပြန်ပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ စိတ်ပင်ပန်းစရာ ကိစ္စတွေက ဘယ်လောက်ပဲ အိပ်ရေးပျက်နေပါစေ အိပ်မပျော်နိုင်လောက်အောင် ဖိစီးနေလို့ပါပဲ …. ။
(၄) လူတစ်ယောက်ဟာ နေရင်းထိုင်ရင်းနဲ့ မဖြစ်သေးတာတွေကိုပဲ တွေးတွေးပြီး စိတ်ပူနေတယ်၊ ဝမ်းနည်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ ဒါဟာလည်း စိတ်ပင်ပန်းလွန်းတာကြောင့်ပါ …. ။
(၅) သူငယ်ချင်းတွေ၊ ဒါမှမဟုတ် တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ ဆုံတဲ့အခါတွေမှာ ပြောပြီးသားစကားကိုပဲ ထပ်ခါထပ်ခါပြောနေမှာပါ။ ဘယ်လိုအကြောင်းအရာကိုပဲပြောပြော နောက်ဆုံးမှာ ပြောပြီးသားစကားကိုပဲ ထပ်ခါတလဲလဲ ပြန်ပြောနေတယ်ဆိုရင်တော့ စိတ်ပင်ပန်းလွန်းလို့ဖြစ်ပါတယ်နော် …. ။
(၆) အမြဲလိုလို စိုးရိမ်နေတယ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကပြောမှာ၊ ကဲ့ရဲ့ခံရမှာ ဝေဖန်ခံရမှာတွေကို အမြဲလိုလို ကြောက်ရွံ့နေတယ်ဆိုတာကလည်း စိတ်ပင်ပန်းလွန်းလို့ဖြစ်တာပါ …. ။
(၇) ဘာမှလုပ်ချင်ကိုင်ချင်စိတ်လည်းမရှိဘူး၊ မျှော်လင့်ချက်တွေမဲ့နေတယ်၊ အနာဂတ်တွေပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ ခံစားရတာကလည်း စိတ်ပင်ပန်းလွန်းလို့ဖြစ်ပါတယ် …. ။
လူတဈယောကျ စိတျအရမျးပငျပနျးနကွေောငျး ဖျောပွနတေဲ့လက်ခဏာ (၇) ခု
တဈျယောကျယောကျဟာ စိတျအရမျးပငျပနျးလာတဲ့အခါ အသေးအမှားလေးတှကေအစ ခံနိုငျရညျမရှိနိုငျတော့ပါဘူး။ တကယျလို့လူတဈယောကျဟာ ဒေါသတှကွေီးနမေယျ၊ ထဈခနဲရှိစိတျတိုစိတျဆတျနမေယျ ဒါ့အပွငျ ဒီလိုလက်ခဏာတှကေို တှနေ့ရေတယျဆိုရငျတော့ အရမျးစိတျပငျပနျးနတောဖွဈလို့ နားလညျပေးဖို့လိုပါတယျနျော …. ။
(၁) လူတဈယောကျဟာ ကောငျးကောငျးမှနျမှနျစီစဉျထားပွီးသားအရာ တဈခုခုကို အနီးကပျမှဖကျြတယျဆိုရငျတော့ ဒါဟာ အရမျးစိတျပငျပနျးနလေို့ပါပဲ …. ။
(၂) အသေးအမှားကိစ်စလေးတှကေအစ စိတျတို၊ စိတျဆတျနတေယျ၊ ဒေါသတှကွေီးနတေယျဆိုရငျတော့ စိတျအရမျးပငျပနျးနလေို့ပါနျော …. ။
(၃) ညဖကျတှကေရြငျ အတှေးတှမြေားပွီး နောကျကမြှအိပျသလို နောကျနမေ့နကျ စောစောထပွနျပါတယျ။ အကွောငျးကတော့ စိတျပငျပနျးစရာ ကိစ်စတှကေ ဘယျလောကျပဲ အိပျရေးပကျြနပေါစေ အိပျမပြျောနိုငျလောကျအောငျ ဖိစီးနလေို့ပါပဲ …. ။
(၄) လူတဈယောကျဟာ နရေငျးထိုငျရငျးနဲ့ မဖွဈသေးတာတှကေိုပဲ တှေးတှေးပွီး စိတျပူနတေယျ၊ ဝမျးနညျးနတေယျဆိုရငျတော့ ဒါဟာလညျး စိတျပငျပနျးလှနျးတာကွောငျ့ပါ …. ။
(၅) သူငယျခငျြးတှေ၊ ဒါမှမဟုတျ တဈယောကျယောကျနဲ့ ဆုံတဲ့အခါတှမှော ပွောပွီးသားစကားကိုပဲ ထပျခါထပျခါပွောနမှောပါ။ ဘယျလိုအကွောငျးအရာကိုပဲပွောပွော နောကျဆုံးမှာ ပွောပွီးသားစကားကိုပဲ ထပျခါတလဲလဲ ပွနျပွောနတေယျဆိုရငျတော့ စိတျပငျပနျးလှနျးလို့ဖွဈပါတယျနျော …. ။
(၆) အမွဲလိုလို စိုးရိမျနတေယျ၊ ပတျဝနျးကငျြကပွောမှာ၊ ကဲ့ရဲ့ခံရမှာ ဝဖေနျခံရမှာတှကေို အမွဲလိုလို ကွောကျရှံ့နတေယျဆိုတာကလညျး စိတျပငျပနျးလှနျးလို့ဖွဈတာပါ …. ။
(၇) ဘာမှလုပျခငျြကိုငျခငျြစိတျလညျးမရှိဘူး၊ မြှျောလငျ့ခကျြတှမေဲ့နတေယျ၊ အနာဂတျတှပြေောကျဆုံးနတေယျလို့ ခံစားရတာကလညျး စိတျပငျပနျးလှနျးလို့ဖွဈပါတယျ …. ။